Markets Archives - The Source
5 days ago by AlfonceEquities
5 days ago by AlfonceBlogs
1 week ago by adminEquities
HARARE, February 14 (The Source) – Quick service restaurant operator Simbisa Brands says its seeking regulatory and shareholder approvals for dual listing, with the secondary listing on the London Stock Exchange Alternative Investment Market and the acquisition of United Arab Emirates-based fast food group, Foodfund.
Zimbabwe stocks extend losses as foreigners dominate sells
2 weeks ago by adminEquities
HARARE, February 13 (The Source) – Zimbabwe Stock Exchange extended losses on Tuesday, shedding 0,15 percent to close at 89,5 points on Tuesday weighed down by BAT and Econet.
Delta, Old Mutual drag ZSE lower
HARARE, February 12 (The Source) – Zimbabwe’s stock market continued its slow decline on Monday, shedding off 0,467 percent to close at 89,63 points on losses by Delta and Old Mutual.
Zim stocks fall despite foreign buys of $3mln
HARARE, February 8 (The Source) – Zimbabwe’s stocks backpedalled on Thursday, but foreign buyers splashed $3 million the day after the central bank said it would allocate more money to a fund allowing offshore investors to take out their earnings.
ZSE All Share Index closes at 90,84 points, Bitcoin tumbles
3 weeks ago by adminEquities
HARARE, February 6 (The Source)- The Zimbabwe Stock Exchange All Shares Index eased 0,11 percent to close at 90,84 points on Tuesday.
ZSE mining index slides on Bindura
HARARE, February 5 (The Source) -The Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) mining index eased 1,71 percent on Monday to 128,19 points weighed down by losses in Bindura Nickel Corporation (BNC) which was down 7 percent to trade at 3,72 cents.
3 weeks ago by adminAfrica
HARARE, February 5 (The Source) – Foreign buyers are making a comeback on the Zimbabwe Stock Exchange (ZSE), buying shares worth $30 million over the past two months after nearly two years of selloffs, as investor confidence returns on the local bourse.
ZSE posts marginal gains
HARARE, February 1 (The Source) – The Zimbabwe Stock Exchange All Shares index slightly gained 0,08 percent to close at 91,39 points on Thursday, with trades restricted to a few counters.
ZSE sheds 9pct in January
3 weeks ago by adminMarkets
HARARE, February 1 (The Source) – The Zimbabwe Stock Exchange All Shares index dropped 8,68 percent in January to close at 91,32 points, on profit taking in most counters as the local bourse continues to correct itself from the bull run that ended in November… Read More
Listless ZSE records marginal loss
HARARE, January 31 (The Source) – The Zimbabwe Stock Exchange All Shares index slightly eased 0,05 percent to close at 91,32 points on Wednesday, as trades remained restricted to very few counters with only four stocks changing prices in the day.
ZSE All Shares Index flat on mixed trades
4 weeks ago by Equities
HARARE, January 30 (The Source) – The Zimbabwe Stock Exchange All Share Index closed flat on Tuesday at 91,37 points with mixed trading.
Stock Exchange opens week high
4 weeks ago by adminEquities
HARARE, January 29 (The Source) – The Zimbabwe Stock Exchange All shares Index advanced 0,10 percent to close at 91,36 points on Monday.
1 month ago by adminEquities
HARARE, January 24 (The Source) – The Zimbabwe Stock Exchange All Shares index retreated by 0,44 percent on Wednesday to close at 91,20 points, offsetting prior gains recorded earlier this week.